responsivní - I-Premium ye-Free Premium Responsive WordPress Themes Downloads
zonke iindidi Izihloko ze WordPress
ikhayaIimveliso ezimakwe "respondzivní"
I-Free Business WordPress Theme
IFree WordPress Theme
I-Mobile WordPress Theme Simahla
5.00 ngaphandle 5
IiNkonzo zoNxibelelwano zokuThengisa iMicrosoft WordPress Theme. IiNkonzo zoNxibelelwano zokuThengisa iMicrosoft WordPress Theme. Kulo lonke uhlobo lweshishini, makube kukuthengisa, imali, i-real estate okanye umcebisi wezebhizinisi, "I-Business Octane" ngumxholo ofanelekileyo wokudala iwebhusayithi yeWebPress. Ukucoceka ukulungiswa, ukuhamba kweendlela ezinobungcali kunye neenkqubo ezibonakalayo zombala kunye nempawu ezahlukahlukeneyo ezivelisayo kwiwebhusayithi ziza kubonisa ukuba khona kwakho. Asikho isidingo sokukhathazeka ukuba ngaba abathengi bakho basebenzise i-mobile okanye i-laptop kwi-intanethi, i-website iya kuphendula ngokubanzi ngaphezu kwe-HTML5 okanye isikhalazo se-CSS3. Nangona zifakwe iimpawu, iwebhsayithi iza kuhamba kakuhle kwaye izakulayisha ngokukhawuleza nakwezinye iiwebhusayithi eziye zikhoyo kwiwebhu.
I-Free Hunger WordPress Theme - Ivenkile yokuphendula i-WordPress Theme
Izihloko ezininzi ze-WordPress ukudala i-website enxulumene nokutya, ivenkile okanye ihotele iyatholakala kule ntsuku kodwa uninzi lwayo alukho kwezinye izinto ezinomdla ezifana nokucwangciswa kwentlawulo okanye iinketho zokubhuka ezakhiweyo kwisikhokelo. Kodwa, "uMtya" ngumxholo olungileyo onokukunika iwebhusayithi ephendulayo ngokupheleleyo kunye nelokubamba iiliso kunye neempawu zanamhlanje. Kukho i-plethora yokukhetha okulula ukulawulayo okudibanisa ukulungelelanisa abathengi bakho. Ukuze unike umnqweno wobuqu, ungayifumana ilungelelaniso naluphi na ixesha. Ukuhamba kunobungane kwaye ukubeka kugcinwa kuyo yonke into.
Iifowuni zefowuni zongeza kwixabiso le-smartphone yakho, makube i-iOS okanye i-Android. Kukho ukhuphiswano olunzima phakathi kwabaphuhlisi bezixhobo zeteknoloji kwaye ukuze wenze iprogram yakho ephuhlisiwe impumelelo yangempela, kuya kufuneka ukuba ubhekane nabaphulaphuli ababanzi kulo lonke ihlabathi. Kule nto, yonke inkampani yophuhliso lwe-app kufuneka ibe newebhusayithi ekhangayo, engafuneki ukuba ikhutshwe ngeempawu ezicebileyo okanye imifanekiso esemgangathweni ephezulu. Injongo inokufezwa ngeengqungquthela ezimbalwa ze-WordPress nge-simple but layout. Umxholo weWeve WordPress ulungele ukubonisa iinkqubo zakho eziphuhlisiwe kubaphulaphuli emhlabeni wonke.
0.00 € Ngeza kwitshathithelekisa